Diksionera Geek, teny vitsivitsy izay ampiasaina amin'ny Internet ary tsy azontsika | Avy amin'ny Linux
Betsaka amintsika indraindray no somary very (raha tsy tanteraka) rehefa mamaky hevitra vitsivitsy amin'ny forum na tranokala amin'ny ankapobeny mifandraika amin'ny teknolojia.
Imbetsaka isika no tsy mahatakatra fanafohezan-teny hafahafa na fanafohezana hitantsika amin'ny valiny marobe avy amin'ny mpampiasa hafa mandroso kokoa ary zatra ny fitenin'ny tamba-jotra.
Indraindray isika dia lasa mieritreritra fa manafika ny tenindrazantsika izy ireo, saingy, na dia mpiaro mafy ny fitazonana ny fanajana sy ny fombafomba aza aho mandritra ny fifanakalozana amin'ny serivisy an-tserasera, tsy dia kely akory izany fa tsy be loatra ny mahafantatra hoe iza avy ireo midika hoe teny tsy fahita firy.
Ka mieritreritra aho fa mety ny mizara amin'ny mpamaky an'ity compendium kely an'ny fanafohezana geek ity sy ny dikany. Alohan'ny hanombohana dia tiako ny hanazava fa ny mahaliana ahy dia tsy ny hampirisika ny fampiasana ireo teny ireo, ny tanjona dia ny hampitombo kely fotsiny ny tontolontsika fahalalana: na tiana na tsia dia ampiasaina io fiteny io ary mpikambana maro ao amin'ny fiarahamonintsika no azo ampiasaina. manam-pahaizana ao. fampiasana azy. Raha tsy misy resaka intsony, ity ny famintinana ny rakibolana Geek ...
Nanazava aho fa indrisy fa ny ankamaroan'ny teny avelako etsy ambany dia misy dikany somary vetaveta, koa mieritreritra aho fa hanompo anao fotsiny ny fahafantarana ny fisiany, satria eto GUTL dia manana ny lalànantsika isika ary tsy hanaiky ny fandikan-dalàna tafahoatra ao amin'ny hevitra. Nanazava io teboka io, dia mandeha ianao.
Andao atomboka amin'ny isa:
4U: Ho anao, ho anao.
4S: Ho antsika, ho antsika.
121: fiderana olona. Amin'ny forum sasany, ny "121.gif" dia sary famantarana maneho ny fiankohofana sy fiderana amin'ny mpampiasa hafa.
1337: / Liit / Leet miteny na leet (1337 5p34k na 1337 ao amin'ny script leet izay horesahintsika amin'ny lahatsoratra iray hafa) dia karazan-tsoratra misy litera alphanumeric ampiasain'ny vondrom-piarahamonina sasany sy mpampiasa media sosialy samihafa.
Faha-4: Mandrakizay, mandrakizay
AFK: fanafohezana ny hoe "Away From Keyboard", amin'ny Espaniôla "Far From the Keyboard", matetika izy io no ampiasaina, indrindra amin'ny fandefasan-kafatra sy lalao video an-tserasera, mba hanondroana fa tsy eo ny iray na tsy azo atrehana, "tsy lavitra ny fitendry".
faran'izay haingana indrindra: "Faran'izay haingana". Faran'izay haingana. Ampiasaina ho fombafomba izany rehefa misy manantena valiny.
asl: "Age, firaisana ary toerana". Ampiasaina amin'ny chat mba hangatahana ny angon-drakitra fototry ny olona iresahanao, ny taonany, ny lahy sy ny vavy ary ny toerany.
RFA: "Raha ny fahafantarako azy". Raha ny fahafantarako azy.
ATM: fanafohezana ny hoe "Amin'izao fotoana izao" (amin'ny teny Espaniola: amin'izao fotoana izao).
antsoina: "Fantatra koa hoe" (fantatra koa amin'ny hoe) dia ampiasaina hilazana anaram-bosotra olona hafa
BRB: / bérbe / Miverena Hiverina (amin'ny Espaniola: hiverina aho izao).
BBL: fanafohezana ny hoe "Miverina atsy aoriana" (amin'ny teny espaniola: hiverina aho avy eo).
BRT: Tongava eo (amin'ny Espaniôla: ho avy aho)
BTW: Amin'ny lafiny iray (amin'ny teny Espaniôla: eny ...)
BFN: Veloma izao (amin'ny teny espaniola: veloma amin'izao)
BB: Bye Bye (amin'ny Espaniôla: veloma)
mpilasy: mpilalao izay amin'ny lalao an-tserasera sasany, indrindra amin'ny FPS, dia mijanona tsy mihetsika amin'ny toerana miandry ny fahavalo, fa tsy mandeha amin'ny fahavalo.
CT: Latabatra fisolokiana, latabatra fisolokiana (cheats) ho an'ny motera fitaka
CYA: izay misy ny C toa "jereo" ary ny YA dia toa "Ianao", koa niresaka ny "mahita anao" manondro ny "Ho hitako ianao any aoriana".
Cracker: dia olona manitsakitsaka ny fiarovana ny rafitry ny solosaina hahazoana tombontsoa manokana na hanisy ratsy fotsiny.
Cdt.- Fanafohezana ampiasaina amin'ny Change of Topic.
lamoria: fanafohezana ny lalao "Call Of Duty"
DI: Fanafohezana ny hoe "Tsy maninona."
Aza manome sakafo ny troll: amin'ny Espaniôla "Aza manome sakafo ny troll". Izy io dia ampiasaina ho toy ny tolo-kevitra mba tsy hianjera amin'ny fihantsiana troll.
DDMAM Ny hoe "aza variana intsony aho" dia midika hoe ... aza variana intsony aho
DD: Mpandray andraikitra "Damage Dealer" (mpivarotra fahasimbana) tompon'andraikitra amin'ny fiatrehana ny ankamaroan'ny fahasimbana.
DPM: "De puta madre", ampiasaina rehefa mandeha tsara ny zavatra iray, amin'ny fomba mahazatra
Dx: Endrika fahatezerana io, ny mifanohitra amin'ny "xD"
D+: Fandikan-teny Espaniola "De Más", milaza zavatra tsara loatra, be mpampiasa amin'ny Chat "
FF: fanafohezana ny, amin'ny teny anglisy, "Fucking Fucker", izay hadika amin'ny "Bastard Fucking!" na fanafohezana ny "Final Fight"
FFS: fanafohezana ny, amin'ny teny anglisy, "For Fuck's Sake", izay adika ho "Fuck, for the love of God!"
Safo-drano: programa na script noforonina mba hamenoana ny spam miverimberina.
FPS: Mpitifitra voalohany. Nampiasaina hanondroana ireo lalao Shooter First Person.
FPS: Kitapo isan-tsegondra. Nampiasaina hijerena ny isan'ny frame na sary ao anatin'ny iray segondra amin'ny lalao video na video.
Frag: Frag dia isa izay manisa ny isan'ny namonoanao mpilalao hafa, izay fampiasa matetika tao amin'ny FPS.
FTL: "Ho an'ny fatiantoka", ampiasaina hanehoana ny tsy fankasitrahana.
FTW: "Ho an'ny fandresena", ampiasaina hanehoana hafanam-po amin'ny zavatra iray.
FYI: "Ho fampahalalana anao", izay mety ho "ho fampahalalana anao"; dia ampiasaina hanazavana zavatra.
FU / fak yu /: "Mampihomehy anao", midika hoe "manadala anao"
FYEO: "Ho an'ny masonao ihany", izay midika hoe "ho an'ny masonao ihany".
FYM: mampihomehy ny reninao
Geek: / guik / olona mahasarika ny teknolojia sy ny informatika, manarona ireo karazana gek isan-karazany avy amin'ny ambaratonga mahazatra mahaliana hatrany amin'ny ambaratonga mahaliana.
gamer: / gueimer / olona mientanentana amin'ny lalao solosaina sy / na console video.
GTA- Fanafohezana ny lalao "Grand Theft Auto".
GTFO: Avoahy / mivoaha ny filokana, amin'ny teny Espaniola “miala”
GTG g2g: Gotta Go / Gouta gou / midika hoe "tsy maintsy mandeha aho" na "tsy maintsy mandeha aho"
GL & HF: Mirary soa ary mifalia; mirary soa ary mankafy. Ny mpilalao na ny mpampiasa dia mampiasa ireo fanafohezan-teny ireo mba hahita firariana tsara sy lalao tsara.
GG: Lalao tsara (lalao tsara). Nampiasaina tamin'ny faran'ny lalao niaraka tamin'ny mpilalao hafa.
GF: Ady tsara (ady tsara). Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny lalao filalaovana andraikitra.
GvG: Guild contre Guild, amin'ny lalao, clan contre clan. Matetika ampiasaina hanondroana ny ady eo amin'ny fokony
GJ / Gj: Asa tsara (asa tsara). Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny lalao shooter olona voalohany, hiarahabana olona na ekipa, sns.
GBA- Fanafohezana ny konsole lalao video "Game Boy Advance".
GW- Fohy amin'ny lalao filalaovana lalao Guild Wars.
GoW: fanafohezana hiresaka momba ny lalao God Of War
GC: fanafohezana ny Good Charlotte ary hiresaka momba ny console Game Game Cube.
Gratz: Fiarahabana (amin'ny teny Espaniola arahaba)
Hacker: / jáquer / teny ampiasaina hanondroana manam-pahaizana amin'ny sampana teknika iray na maromaro mifandraika amin'ny teknolojia fampahalalana sy ny fifandraisan-davitra izay liana amin'ny fahalalana, mahita na mianatra zava-baovao ary mahatakatra ny fomba fiasan'izy ireo.
Hax : / Jacs / Midika hoe "Hack" fa amin'ny teny "H4x0r". Ao amin'ny Netbattle dia ampiasaina amin'ny mpilalao "tsara vintana" izy ireo satria tsy afaka manimba ny Pokémon na mamely "Critical hit" matetika.
HC: Ireo fanafohezana ireo dia misy dikany roa ao amin'ny Habbo Hotel, ankoatry ny midika hoe "Habbo Club" izay olona nividy bonus manokana tamin'ity resaka ity, antsoina koa hoe "Chulos Habbo" ireo olona manararaotra ireo tombontsoa ireo sy mandany izay rehetra manosotra ny volan'izy ireo amin'ny andro, ny bika aman'endriny, ny ompa, na ny fihetsika toa azy Trolls (miantso ny Noob maro an'isa) ary tsy miraharaha ireo mpampiasa hafa. Amin'ny fahatongavana ho HC dia mazàna ahenany ny voambolana ho teny 3: HC, Vip ary Noob.
HDP: amin'ny teny Espaniola, fanafohezana ny "Son Of Puta".
HFH: amin'ny teny Espaniola, fanafohezana ny hoe "Hacela Fácil Huevon".
Mpanasitrana: mpanasitrana, toetra izay mitana ny andraikitry ny fanasitranana.
Hey: Salama (amin'ny Espaniôla: arahaba).
HL: Manàna vintana (amin'ny teny espaniola: mirary soa) amin'ny lalao an-tserasera, alohan'ny hanombohana, maniry vintana; midika ihany koa ny antsasaky ny fiainana (lalao fps io)
HANCYGAN: kolikoly amin'ny tsipelina ny "mandre". Izy io dia manisy firesahana ireo lahatsoratra feno valisoan-tsipelina ary ireo olona manoratra azy.
HMS: Naratrao ny fihetsem-poko
HP: fohy ho an'ny "Zanak'akanjo." Teboka fahasalamana "Points Health". "Herin'ny soavaly".
HQJ: fohy ho an'ny "Fuck you!"
HS: / hs - jedshot / fanafohezana ny hoe “Head Shot” (: loha voatifitra). Ampiasaina amin'ny lalao video.
haza: / hanted / ity teny ity dia ampiasaina amin'ny lalao sasany amin'ny ankapobeny raha miresaka amin'ny olona milaza aminy hoe hazaina izy (tsy hampitsahatra ny famonoana azy ny mpilalao), raha miteny izany ny lehilahy iray, dia mitovy amin'ny: “Hetezo aho ny atodinao ”ary raha milaza izy fa ny vehivavy dia mitovy amin'ny:" mpanolana dia ho faty ianao "na izany na tsy izany dia saika mitovy.
natrehin'ireo: vokatra miteraka fanantenana be dia be mamokatra "hype". Ampiasaina be amin'ny lalao video efa nandrasana hatry ny ela, ny tohin'ny andian-tantara sns.
IMO / IMHO / IMAO: fanafohezana ny hoe "In My Opinion" / "In My Humble / Honest Opinion" / "In My Arrogant Opinion", kinova anglisy ho an'ny EMHO, "In My Humble Opinion".
IRL: fanafohezana ny hoe "In Real Life" ("amin'ny tena fiainana").
ICBI: fanafohezana ny hoe "Tsy Mino An'izany aho" ("Tsy mino an'izany aho").
IMBA: fanafohezana ny tsy fandanjana izay midika hoe tsy mahay mandanjalanja / tsy mifandanja. Ampiasaina izy io rehefa ambony noho ny hafa ny mpilalao, izany hoe mandoa vola.
IM: Hafatra eo noho eo, izay ho toy ny Chat
IC: Insert Coin, dia ampiasaina hanohizana ny filalaovana milina, na milina slot.
IOW: fanafohezana ny hoe "Amin'ny teny hafa" ("amin'ny teny hafa").
ILU: Tiako ianao (ny U dia misolo anao) milaza fa tiako ianao amin'ny fomba fohy sy fohy.
IGM: In Game mesage Ity dia ampiasaina hanondroana ireo mailaka miasa ao anatin'ny lalao.
JIC: fanafohezana ny hoe "Just In Case" ("Just in case").
JK: fanafohezana ny hoe "Kidding Just" ("Fihomehezana fotsiny").
Jamer: (mitovy amin'ny KS) izay nampiasaina tamin'ny filalaovana lalao mba hilazana ireo olona mamono biby goavam-be an'ny hafa, ka manala ny "zavatra niainany" (isa azo avy amin'ilay dragona)
K / KK: fanafohezana ny hoe "OK" ("Okay, very good"). Amin'ny Espaniôla, "que" (KAY na Q ihany koa no ampiasaina). Indraindray, indrindra amin'ny MMORPGs, K miaraka amina milina fanoratana (2k = 2.000) sy kk tapitrisa (2kk = 2.000.000)
KEWL: mitovy hevitra amin'ny teny hoe "cool" (tsara)
KS: fanafohezana ny hoe "Kill steal" amin'ny lalao an-tserasera, indrindra amin'ny MMORPGS, dia fanao halatra valisoa amin'ny famonoana fahavalo, raha valim-pitia, vola na zavatra vitsivitsy no valisoa azo.
KH: Fanafohezana hiresaka momba ilay lalao milalao andraikitra "Fon'ilay Fanjakana"
KOF: Fanafohezana ny lalao "Mpanjakan'ny mpiady"
KI: Fanafohezana ny lalao "Killer Instinct"
ekipa: fahasarotana ateraky ny fahataran'ny fifandraisana matetika ateraky ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana internet.
Milelaka: / Leimar / olona kely jiro (ny mifanohitra amin'ny mpijirika, tsy mahay mampiasa solosaina) izay mampiseho fampahalalana ihany koa. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny lalao an-tserasera mba hilazana ireo mpilalao mahazo isa amin'ny famonoana mpilalao tsy misy mpiaro (tsy misy fitaovam-piadiana), ivelan'ny Internet na misy lag ary koa ireo izay tsy mahay milalao na Newbies. Amin'ny lalao Warcraft 3 dia ampiasaina izy io ny olona izay manafika ny toeran'ireo mpanohitra nefa tsy miaraka amin'ny fitsangatsanganana tantanan'ny solosaina.
Leecher: olona manararaotra ny haren'ny hafa nefa tsy manome na inona na inona ho valiny. Ohatra, mampifandray sary avy amin'ireo mpizara hafa izahay nefa tsy mahazo alalana, na amin'ny tranga P2P, olona iray misintona zavatra maro nefa mizara vitsy.
Leet: / lit / voalohany l33t na 1337 ao amin'ny ASCII, dia midika hoe sangany, olona na vondrona mahay indrindra amin'ny raharaha siansa informatika.
TPT: fanafohezana ny hoe "Loser on Line", "Laughing Out Louds", ary koa "Lot Of Laughs", fihomehezana na fihomehezana no fandikana azy amin'ny teny Espaniôla. Na dia mety tsy mitovy aza ny famaritana azy arakaraka ny resadresaka dia azo ampiasaina ohatra ny ihomehezana ny toe-javatra iray izay nitranga, tamim-panesoana amin'ny vazivazy tsy mitombina.
LMFAO: / Limfao / fanafohezana ny teny vetaveta Mihomehy ny Fihomehezana Fahatokisako izay ny fandikan-teny dia hoe "taitaitra amin'ny fihomehezana 'mampihomehy'" manampy fanamafisana bebe kokoa amin'ny teny hoe "mampihomehy".
LMAO: / Limao / fanafohezana ny teny vetaveta Mihomehy ny Fanjakako izay ny fandikan-teny dia hoe "mampihomehy amin'ny fihomehezana".
LP: fanafohezana ny vondrona amerikana "Linkin Park", "Long Play"
LPMQLP: Fanafohezan-teny arzantina an'ny "La puta madre que pario"
Lulo: Cheater, teny iray ampiasaina matetika amin'ny lalao an-tserasera "Counter Strike" mba hilazana ireo izay mampiasa fandaharana misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny mpilalao amin'ny famonoana ny tifitra voalohany sy zavatra hafa.
L2: fanafohezana ny lalao milalao andraikitra malaza an-tserasera Lineage 2
même: Mitranga ao amin'ny tontolon'ny bilaogy izany ary lahatsoratra iray miparitaka amin'ny bilaogy iray mankany amin'ny bilaogy iray hafa mba hampitomboana ny fivezivezin'ny mpitsidika.
MILF: fanafohezana ny hoe "Neny te-hikoty aho." Nadikan'ny MQMF malaza (Reny izay hanadala ahy) avy amin'ny sarimihetsika American Pie.
MMORPG (Massive Multiplayer Online RPG marobe): Lalao milalao andraikitra an-tserasera marobe marobe. Lalao mitovy amin'ny RPG mahazatra (Final Fantasy, Diablo, Tibia, vavahady Baldurs, sns), saingy natao ho an'ny Internet sy amin'ny olona maro miaraka.
MP: Mana Points: mana point, (izy io koa dia voalaza ao amin'ny teboka Dofus to Move) amin'ny forum sasany dia fantatra amin'ny hoe Message Private na PM (hafatra manokana)
M8: / meit /, midika hoe mpiara-miasa, mpiara-miasa, sns.
MF: fohy ho an'i Neny Fucker
MK: fohy ho an'ny lalao "Mortal Kombat"
MCR: fohy ho an'ny My Chemical Romance
NH: fitenenana amin'ny teny anglisy izay midika hoe / Tsara tanana /, amin'ny Espaniôla, tanana tsara. Ampiasaina amin'ny poker matetika. Ampiasaina ihany koa amin'ny fiarovana ny taloha izay midika hoe / Tsy misy mahery fo / izay manondro fa ny mahery fo dia tsy hita amin'ny toerana voalaza.
NPI: fanafohezana ny "Ni Puta Idea". Ampiasaina be amin'ireo forum ireo izay tsy ahafahanao mampiasa teny ratsy, teny ratsy, maloto sns.
Noob: / newbie / teny ampiasaina hanondro zazavao amin'ny lalao an-tserasera, forum, na tontolon'ny Internet. Amin'ny lalao an-tserasera dia matetika ampiasaina amin'ny fanalam-baraka amin'ireo mpilalao tsy manaja ny mpilalao na ny lalàna, na tsy mahalala azy ireo tsotra izao, mampijaly azy ireo ary miteraka tsy fahazoana aina amin'ny sisa amin'ny mpilalao sy amin'ny fampandrosoana mahazatra ny lalao. (Amin'ny ankapobeny dia resaka lalao video troll)
NP: expression amin'ny teny anglisy midika hoe / tsy misy olana /, amin'ny Espaniôla, tsy misy olana. Ampiasaina be amin'ny lalao an-tserasera mba hanome valiny fohy sy fohy amin'ny mpiara-miasa fa tsy handany fotoana.
NS: Acronym of / Nice Shot /, amin'ny teny espaniola, tsara voatifitra. Ampiasaina ao amin'ny Shooters izy io hiarahabana olona iray hafa, na namana na fahavalo, noho izy nahavita tifitra tsara na lalao tsara.
NSFW: Tsy azo antoka amin'ny asa, amin'ny teny Espaniola "tsy azo antoka amin'ny asa"; dia ampiasaina hanevan-tsaina ny atiny mahery setra, ara-nofo na tsy mahafinaritra izay mety tsy mety amin'ny sehatry ny asa.
N64- Fanafohezana ny console lalao video "Nintendo 64".
NFS: fanafohezana ny hoe "Tsy amidy". Ampiasaina amin'ny lalao izy io hanondroana fa tsy amidy ny entana sasany. Izy io koa dia mety manondro ny Need for Speed.
"O RLY?". O RLY? / YA RLY / TSY WAI: / ohreli? - yareli - nowei / fanafohezana ny "Oh Tena?", Iza no azo adika amin'ny teny espaniola hoe "Serieux?" Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny endrika fanesoana rehefa misy zavatra miharihary na mifanohitra loatra na valin'ny zavatra tsy dia atokisana loatra. Voavaly miaraka amin'ny YA RLY izay midika hoe "Ie, tena" (Eny, matotra), arahin'ny "TSIA WAI" (Tsia, tsy mety izany).
Andriakaky ô: / omj / fanafohezana amin'ny teny anglisy ny "Andriamanitra ô!" izay ny fandikan-teny amin'ny teny espaniola dia "Oh Dios mio!".
OFC: / ofcurs / fanafohezana amin'ny teny anglisy ho an'ny "Mazava ho azy!" izay ny fandikana azy amin'ny teny espaniola dia "Por Supuesto".
OMFG: / omfj / fanafohezana amin'ny teny anglisy an'ny "Oh my Fucking God!" fanovana ny OMG.
OMW: fanafohezana amin'ny teny anglisy ho an'ny "On my way" amin'ny teny Espaniôla, "Efa ho avy aho."
nanana: / ound / nampiasain'ny mpijirika sy ny manam-pahaizana momba ny solosaina, ilay teny antsoina hoe manimba ny filaminan'ny rafitra iray, mahazo fidirana feno na faka. Niely izy avy eo, nanondro ny faharesen'ny mpampiasa iray noho ny iray hafa tamin'ny lalao an-tserasera. Izy io dia azo jerena ihany koa ho "pwned" / pound / izay teraka tamin'ny fanoratana diso "tompona" soloina "o" ho "p". Izy io koa dia ampiasaina hanasongadinana ny tsy fahalalan'ny olona iray momba ny lohahevitra manokana, na ho sangisangy rehefa nisy olona ratsy toetra. Ny variants hafa dia 0wned, Own3d, pwned, pwn3d, ary pown. Io ihany koa ny andianteny lehibe an'ny monster cookie.
ICO: fanafohezana amin'ny teny anglisy ny Oh! Azoko! ny dikanteniny dia "hitako"
OOP: / oop / fanafohezana amin'ny teny anglisy ny "Out Of Place" amin'ny teny espaniola dia midika hoe "Out of Place". Izy io dia ampiasaina hanondroana fa tsy ao amin'ny PC ianao, ampiasaina amin'ny MSN Messenger matetika izany hanondroana fa tsy ao anaty solosaina ianao, ankoatry ny "Away".
PCW: fampifanarahana ny anglisy "Practic Clan War", "Friendly match". Ampiasaina indrindra amin'ny lalao FPS.
PLZ: fampifanarahana ny anglisy hoe "Azafady", "Azafady". Nampiasaina mba hangataka zavatra sarobidy amin'ny olona iray. Ampiasaina indrindra amin'ny lalao MMORPG izy io.
pr0n: fampifanarahana ny "pôrnôgrafia" anglisy, amin'ny sary vetaveta "pôrnôgrafia". Nampiasaina hilazana ny atiny
sary vetaveta. Ny teny hoe "p0rn" dia ampiasaina ihany koa. Nampiasaina hanodinana ny Sivan'ny Teny an'ny MMORPG
PLOP: toy ny tabataban'ny rehefa misy mianjera..dia toa plop (mianjera satria tena vendrana hoy ny hafa) no tena atao anaty chat
PK: Mpamono mpilalao. Ampiasaina amin'ny lalao video, rehefa mamono olona iray hafa ny mpilalao nefa tsy misy fanamarinana, amin'ny lalao mmorpg matetika.
PKT: io no fanafohezana ny pakete, teny iray ampiasaina matetika amin'ny lalao an-tserasera mba hanondroana ireo olona nolavina tamin'ny lalao, jereo ny amok
Ohb: io no fanafohezana ny Professional, dia voalaza ho an'ireo olona mahay mitantana tsara ny "lalao" (solosaina). Nampiasaina hanondroana ny lalao Konami "Pro Evolution Soccer" ihany koa.
PTI: Io no kinova Espaniola an'ny FYI, ary mety hidika hoe "Ho fampahalalana ho anao".
Pst: dia ny fanafohezana izay azon'ny feo tsara ... ny dikany dia toa anao hey.
pvp: dia ny fanafohezana ny Player versus Player (mpilalao mifanohitra amin'ny mpilalao). Izy io dia ampiasaina amin'ny lalao MMORPG.
PTM: dia ny fanafohezana ny Puta Madre. Ampiasaina mihoatra ny zavatra rehetra ao amin'ny chat izy io
PS: mandrora toa "ps" oe ps melas ... ampiasain'ny Peroviana, Venezoeliana, Meksikana ary Latino sy Hispanika maro ihany.
PLR: Fanafohezana shiliana an'ny "Kick In The Raja"
r0x : Teny ampiasaina amin'ny netbattle hilazana mpilalao iray maharesy ny hafa amin'ny fampiasana pokémon iray fotsiny.
ROFL / ROTFL: fanafohezana ny hoe "Rolling On The Floor Laughing", amin'ny teny Espaniola "Rolling on the floor hehy" ary ny fanovana ny LOL izay manondro fihomehezana tsy voafehy, indraindray mipoaka.
ROFLMAO: fanafohezana ny hoe "Mihorakoraka eny ambonin'ny gorodona mihomehy ny borikiko", amin'ny teny espaniola "Manakodia amin'ny tany mamaky fihomehezana ny borikinao" na "mihomehy mihohoka amin'ny tany"
RTFM: / rìdefama / fanafohezana ny “Read The Fucking Manual”, amin'ny teny Espaniola “Lee el puto / jodido / puñetero / culiao manual”. Ampiasaina ho valin'ny fanontaniana iray izay tsy nilaina izany raha novakiana ilay boky torolalana.
RU: fanafohezana ny hoe "Ianao ve?", "Ianao ve?"
RMK: fanafohezana ny hoe "Remake", "Recreate". Ampiasaina be amin'ny lalao an-tserasera handefasana indray sarintany lalao.
RLZ: Fitsipika. ampiasaina ho toy ny hoe "izay no tsara indrindra" na "izay mibaiko"
RS: fanafohezana ny lalao RuneScape, midika koa izany hoe "respawn" (Espaniôla izany: tondroina hisehoan'ny mpilalao aorian'ny famonoana azy, amin'ny ankapobeny dia eo am-pototry ny ekipany)
RSS: Manondro ny fanafohezana (Syndication Tsotra Tsotra). Amin'ny teny anglisy ny dikany dia "mamoaka lahatsoratra miaraka amin'ny haino aman-jery samy hafa amin'ny alàlan'ny loharanom-pahalalana misy azy"; antsoina matetika hoe "RSS feeds".
RE: Fohy amin'ny lalao fampihorohoroana malaza "Resident ratsy"
Scrim: fihaonambe ofisialy eo amin'ny fianakaviana 2, ao amin'ny FPS no tena miseho.
STFU: Akombohy ny fikitika: afaka miantso ratsy hoe "Akombohy ny vava mampihomehy!"
STFW: Search The Fucking Web: "karohy ny tranokala", midika izany fa tokony hikaroka ianao alohan'ny hanontanianao ny mazava.
SOM1: Olona, ​​olona.
mpandringana: avy amin'ny teny anglisy "Spoil" izay ny heviny ara-bakiteny dia ny "manimba (azy), manimba (azy) manary sns." ny dikany ampiharina dia mety "manimba ny teti-dratsy na tetika" ary azo ampiharina rehefa misy maneho hevitra amin'ny boky, sarimihetsika, lalao sns. mamoaka atiny na ampahany manan-danja amin'izany.
SYL: Mifankahita taty aoriana: "Mahita anao aho avy eo" manondro ny "mifankahita isika avy eo" na bebe kokoa amin'ny teny espaniola hoe "mifankahita isika"
SBLN: tena tsara ny net, voambolana taloha milaza fa manaiky ianao
Spam: Ao amin'ny Internet Forum, "lahatsoratra" fohy tsy misy dikany izay latsaky ny 10 teny no antsoina hoe spam
SSB: fohy ho an'ny lalao "Super Smash Bros".
SF: fohy ho an'ny lalao "Street Fighter"
SC: fanafohezana ny lalao "StarCraft"
SRY: fanafohezana ny amin'ny teny anglisy "Miala tsiny" izay amin'ny teny espaniola dia "Lo Siento".
BARIKABE: mpilalao karazana mele tank mitarika vondrona iray (lalao milalao andraikitra)
CBT: fanafohezana ny hoe "Fantatra koa", amin'ny teny anglisy AKA, "Fantatra koa hoe".
TK: Mpamono ekipa. Ampiasaina amin'ny lalao video, rehefa mamono ekipa iray hafa tsy misy fanamarinana ny mpilalao iray, amin'ny mpitifitra ekipa amin'ny ankapobeny TFTI: fanafohezana ny hoe "Misaotra ny vaovao", amin'ny teny Espaniôla "misaotra ny vaovao". Ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny tranga amin'ny fomba maneso na mahatsikaiky ho an'ny zavatra miharihary izay omena fanazavana be dia be sy be loatra.
TLDR: fanafohezana ny hoe “lava loatra, aza mamaky” (lava loatra, aza vakiana). Amin'ny ankapobeny ampiasaina amin'ny forum.
Troll: olona manao fihetsika manelingelina amin'ny tanjona tokana hisarihana ny saina sy hanorisory.
Ty: Misaotra, amin'ny Espaniola, misaotra betsaka.
THX: Misaotra, misaotra
TNX: Misaotra, gracias [fomba hafa ilazana Misaotra] TMTH: Hampiasaina betsaka
U2: Ianao koa, ianao koa, mitovy.
U: Ianao, ianao, ianao.
UR R8: Marina ny anao, marina ny anao.
VIP: Olona tena manandanja.
fotsy: Fotoana tena manandanja.
WTB: fanafohezana "te-hividy" ampiasaina amin'ny lalao an-tserasera. Nandika ny "Te-hividy aho"
WTF / guatafak / : fanafohezana ny hoe "What The Fuck?" (Fa inona ilay fika / fika / shit / weá?), Fomba fiteny amin'ny teny Anglisy mba hanehoana fahagagana na gaga, na hanehoana tsy fitoviana hevitra.
WTH: fanafohezana "What the Hell?" (Inona tsara hoe?)
WTS: fanafohezana "te-hivarotra" ampiasaina amin'ny lalao an-tserasera. Nandika ny "Te hivarotra aho"
WTT: fanafohezana "te-hivarotra" ampiasaina amin'ny lalao an-tserasera. Nandika ny "Te-hanao varotra"
W8: midika hoe Miandrasa, satria amin'ny teny anglisy ny 8 dia tononina hoe "valo" ary raha tononina ny W + 8 dia mitovy amin'ny fomba fanononana azy hoe Wait (amin'ny Espaniôla: wait).
WOW: fanafohezana ny hoe “World of Warcraft”, lalao MMORPG malaza avy any Blizzard
XOXO: ampiasaina hanehoana oroka, io koa dia teny ampiasaina hanoharana ny "oroka sy fifamihinana"
xD: ampiasaina hanehoana fihomehezana. Tsy misy dikanteny io. Maneho endrika mihomehy, ny "x" dia ny maso mikatona ary ny "D" dia ny tsiky
xP: ampiasaina hanehoana fihomehezana amin'ny famoahana ny lela (toy ny avy amin'ny "Maditra"). Tsy misy dikanteny io. Mampiseho fihomehezana tsy mendrika izy io, ny "x" dia ny maso mikatona ary ny "P" dia vava mipaoka ny lela.
XXX na xxx: Fanafohezana ny "Kisses" namboarina, matetika ampiasaina hanaovana veloma olona, ​​amin'ny chat na mailaka.
Exp: avy amin'ny teny anglisy "Experience", hanondroana ny zavatra niainan'ny mpilalao iray, na angamba ampiasaina amin'ny hoe XP, azo ampiasaina koa izy hanehoana fihomehezana amin'ny fiteny xP
loharanom-baovao: Lahatsoratra nalaina tao amin'ny GUTL.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Diksionera Geek, teny vitsivitsy izay ampiasaina amin'ny Internet ary tsy azontsika
Mahatsiaro ho toy ny noob aho>.
0.0… Tsy nahalala teny 10 akory aho… tena mankamin'ny tiako indrindra izany
Lahatsoratra tsara ho an'ny Internet n00bs.
Na izany aza, ho an'ny referansy haingana dia aleoko mampiasa Urban Dictionary na Internet Slang (samy azon'ireo tsindry bokotra roa avy amin'ny Chromium lehibe).
Misy izany, raha ny fanazavana: M3H43NC4N74D0L0D335CR181R3N L337
€ $ Ø n0 3S ©µþ © øµþ4®æÐ0 ¢ Øn Ł0 Ωü € ¥ ø §0 ¥ © æþ4z Ð € Ħ4 ¢ 3®
SkyTo dia hoy izy:
tsy misy izany raha oharina amin'izay azoko atao
Mamaly an'i SkyTo
ARY IZAY Nosoratako tamin'ny teny espaniola tsy takatry ny saina, BWAHAHAHAHA
Afaka eny na eny ianao
Orale fa tsara vibes, misaotra betsaka tamin'ny lahatsoratra ADD tianao indrindra
Fifosa dia hoy izy:
Valiny ho an'i Goss
Ianao koa cani
Na dia mieritreritra aza aho fa tsara sy mampahalala ny paositra, mihevitra aho fa io karazana zavatra io dia mitondra fanodikodinam-pitenenana fotsiny ary mametra ny fifandraisana satria zavatra iray ny fampiasana ny fiteny teknika ary ny iray hafa te-hanafohy na hanapotika ny teny toa misy olona miantoka ny fanoratany tsara na ny taratasy.
Manaiky tanteraka, tsy ho ela izy ireo dia tsy maintsy mamorona zavatra hahafahana mandika ny hevitra ao amin'ny tranonkala.
Mahamenatra ny manan-karena sy be ny voambolana Espaniôla amin'ny karazany rehetra izay tsy maintsy ampiasaintsika amin'ireo fanao "mifampiresaka" kely ireo.
Minoa ahy, anisan'ny voalohany mijaly noho ny tantely aho rehefa mahita hevitra toy izao:
Hiteny aho fa tsy afaka mankany amin'ny FromLinux ..
Fa ny tanjon'ity lahatsoratra ity dia ny hanome referansa ireo teny ampiasaina fotsiny, mba tsy ho very isika 😀
hahahaha mahaliana tokoa ny slang internet, maro no mahalala azy ireo ary ny hafa mbola tsy nahita azy ireo, ny tena halako indrindra hoy i elav «zzZZzonNn LazZ p3rzZzonAz ke 3ZzkriBenNn azZzi» aaaaaaaaaaiiiisshhhh mahatezitra ahy izany!
Metefam.com dia hoy izy:
Saika fiteny hafa io !!! Ho foana ve ny fiteny rehetra ary hijanona ho fiteny iraisan'ny rehetra ve izany? hehe
Halako ny fitenin'ny olon-tsy fantatra amin'ny internet. Uff ... miteny espaniola sy anglisy ihany aho, tsy te hianatra an'io fiteny io hahahaha taona vitsy lasa izay ny "h4cx3rz 3skr1b14an 4s1" ary avy eo nanontany ahy izy ireo momba ny "programa iray hisotasota" hahahahaha fotoana mahafinaritra toy inona those
leeuw dia hoy izy:
MDR: avy amin'ny forum francophone «mort de rire», «maty hehy»
Mamaly an'i leeuw
Ampio maika ny zanako lahy cn ny namany voasoratra amin'ny kaody 8 na 9 na 10 azonao atao ve ny milaza amiko ny dikan'izany?
JEAN CARLOS RODRIGUEZ dia hoy izy:
TIAKO IZAO IZAO RAHA afaka miresaka amin'ny namako araka izay azoko atao aho
Valio amin'i JEAN CARLOS RODRIGUEZ
Mr'G dia hoy izy:
Mahafinaritra, raha izao no azonao tsara kokoa amin'ny Internet,
Fa ny fiteny voajanahary no tsara indrindra,
Raha miteny amin'ny fanafohezana sy fanafohezana isika dia saika tsy misy olona hahatakatra antsika. 🙂
Valio amin'i Mr'G
Rolando Medrano Pacheco dia hoy izy:
Tena mahaliana. TKVM.
Valiny tamin'i Rolando Medrano Pacheco
Manana fanontaniana izay midika aho fa rehefa miteny ny vehivavy hoe "Faly aho misaotra anao (M)"
Izy no sakaizako na sakaizako saingy ny tena marina dia tsy dia mahay loatra aho amin'izany, nanontany ahy vetivety izy ary tiako ho fantatra ny dikan'izany rehetra izany
Cristal dia hoy izy:
Azonao lazaina amiko ve ny dikan'ny XLZP? azafady ary koa QDCB?
Valiny amin'ny kristaly
Gerardo233 dia hoy izy:
Notadiaviko ilay m8: v 2spooky5shrek KK
Valiny tamin'i Gerardo233
Te hahafantatra fotsiny ny dikan'ireo taratasy ireo aho raha eo amin'ny faceboook na amin'ny tambajotra sosialy ngdgda sasany
KT dia hoy izy:
Misaotra, tsy dia lalao loatra aho, ity dia hanampy ahy XD betsaka
Valiny amin'i KT
Iza no afaka milaza amiko ity hafatra ity:
Valio amin'i ENRI
Apper: Tantano amin'ny fonosanao ao amin'ny KDE